Wararka Maanta: Jimco, Jun 8 , 2018-Dagaal culus oo xalay ka dhacay degmada Waajid ee gobolka Bakool
Jimco, June, 08, 2018 (HOL) – Faah faahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar xalay xooggag ka tirsan Al-shabaab ku qaadeen saldhigyo ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiya ku leeyihiin degmada Waajid.
Al-shabaab ayaa lagu waramayaa in ay labo jiho ka weeraray degmada Waajid, iyadoo ay beegsadeen xeryaha labada ciidan, waxaana halkaasi ku dhexmaray dagaalka hubka waa weyn la’isku adeegsaday.
Sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda oo lagu magacaabo Jaamac Faarax Muuse ayaa sheegay in ay iska difaaceen xoogaggii soo weerarayy, wuxuuna beeniyay wararka sheegaya in Shabaab ay gudaha u soo galeen xaafad ka tirsan xaafadaha degmada Waajid.
Sarkaalka ayaa sheegay in xoogagga weerarka soo qaaday ahaayeen kuwo xooggan, kuna soo talagalay in wax-yeelo ka gaystaan.
6/8/2018 4:04 AM EST
Jimco, June, 08, 2018 (HOL)-Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa ka digey cadaadis ugaga imanaya gudaha iyo dibbada midnimada dalka Soomaaliya waxana uu goluhu walaac ka muujiyay halista uu ururka Al-shabaab ku haya amaanka dalka Soomaaliya.